अभिभावकत्व - Tanahun Awaj
सन्दर्भ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस महिला कि म हेलाँ…
Home विचार/दृष्टिकोण	अभिभावकत्व
by Tanahu Awaj 4th June 2020 4th June 2020
4th June 2020 4th June 2020 69 views
इतिहासमा साना साना बाईसे चौवीसे राज्यमा विभाजित नेपाल आज विश्वमानचित्रमा एक लाख ४७ हजार एक सय एकासी बर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेको एउटा छुट्टै स्वतन्त्र र सार्भभौम राज्यको रुपमा स्थापित छ । श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले चाहे नेपाल एकिकरण गर्ने हेतुले होस् या चाहे आफ्नो गोरखा राज्य विस्तार गर्ने हेतुले, उनले शुरु गरेको कदम र उनि पछिका उनका बंशको प्रयासले गर्दा नै आजको नेपाल सम्भव भएको हो । यसमा दुईमत छैन । नेपालको इतिहासको सामान्य मात्र जानकारी हुने हरकोहीलाई थाहा भएको कुरा हो कि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको अभिभावकत्व विभिन्न किसिमको शासनसत्ताले लिँदैलिदै आजको मितिसम्म आईपुगेको हो । समयको चक्र गतीमा नेपालको शासनसत्ता कहिले जहानिया राणा शासनले सम्हाल्यो । कहिले शाहबंशी राजतन्त्रले । आज नेपालको शासनसत्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्हाली रहेको छ ।
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा पूर्ण रुपमा सही वा पूर्ण रुपमा गलत हुँदैन । हरकुनै शासन व्यवस्थाको सवल पक्ष पनि हुन्छन् र दुर्बल पक्ष पनि । नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई महत्व दिन नसक्दा एउटा शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ र अर्को व्यवस्था शुरु हुन्छ । हिजो नेपालको जहानीया राणा शासनमा पनि त्यही भएको थियो र शाहबंशीय राजतन्त्रमा पनि । एउटा निश्चित कालखण्डसम्म नेपालको लागि त्यही शासन व्यवस्था नै ठीक थियो सायद, तर समयको गतिसंगै नागरिकको चेतनास्तर बृद्धि भयो । ती शासन व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार र आवश्यकतालाई प्रयाप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सकेनन् र ती पतन भए । फलतः हामीले प्राप्त ग¥यौं विश्वकै सर्वोत्कृष्ठ शासन पद्धति–‘गणतान्त्रिक शासन पद्धति’ । नेपालको इतिहासमा राणाहरुले १०४ बर्षसम्म जहानीया हुकुमत चलाए भने शाहवंशीहरुले २४० बर्षसम्म शासन गरे ।
१०४ बर्षसम्म, एक शताब्दी जनतालाई चित्त बुझाएर हुन्छ कि दवाएर हुन्छ त्यतिबेलाको कालखण्ड र इतिहास अनुसार राणाहरुले नेपालमा शासन गर्न सफल भए । एक बंशीय राजतन्त्रबाट वाक्क हुन हामीलाई दुई सय चालीस बर्ष लाग्यो र बल्ल हामीले प्राप्त ग¥यौं विश्वकै सर्वोत्कृष्ठ गणतान्त्रिक शासन पद्धति । हाम्रो गणतान्त्रिक शासन पद्धति अहिले पनि बाल्यावस्थामै छ । यो बल्ल आफ्नो दोस्रो दशकसम्म छ । विश्वको सर्वोत्कृष्ठ प्राणी मानिस पनि अधिकांशतः बल्यावस्थामा चञ्चल अपरिपक्क हुन्छ । उसमा बालहठ र जिद्धिपना हुन्छ । उसको लागि आफू केवल स्वयम मात्र सर्वोश्रेष्ठ हुन्छ । त्यसैले होला हाम्रो शासन पद्धति पनि अपरिपक्व छ । यो बाल्यवस्थामै छ । किनभने हाम्रो शासकहरुमा बालहठ र जिद्धीपना छ । उनिहरुको लागि आफूहरु स्वयम् उनिहरु मात्र सर्वश्रेष्ठ हुन् । आज सरकारमा रहेका हाम्रा शासकहरुलाई आफ्नो अमूल्यमत दिएर त्यहाँसम्म पु¥याउने एउटा नागरिक म पनि हूँ । तर आज तिनको काम गराई र गैरजिम्मेवारीपना देख्दा आफैसंग बैराग लागेर आउँदछ । ‘हा…य कस्तो अभिभावक छानेछु मैले ।’ क्रुर जहानीया राणा शासन पनि एक शताब्दी चल्यो नेपालमा । एकवंशीय राजतन्त्र पनि साढे दुई शताब्दी चल्यो । तर डर लाग्छ कतै हाम्रा अभिभावक भनाउँदाहरुको चालामालाले गर्दा विश्वकै सर्वोत्कृष्ठ शासन पद्धतिले बाल्यकालमै पतन हुनु पर्ने त होइन हाम्रो नेपालमा ?
अहिले त्यस्तो कमै होला ? तर पहिले पहिले नेपाली समाजमा एउटा चलन व्याप्त थियो, घरघरमा व्याप्त थियो । त्यो के भने घरगृहीणीले खाना बनाउँदा घर मुलीलाई सोध्ने चलन– तरकारी के बनाउने ? कस्तो बनाउने ? भनेर । मानौं कि घरमुलीलाई तरकारीमा पिरो रुच्छ भने तरकारी पिरो बनाउने । त्यो घरको अरु सदस्य र बालबच्चालाई पिरो मन परोस नपरोस् त्यसले फरक पर्दैनथ्यो, घरमुलीलाई पिरो मन पर्दछ बस् । खाना पनि पहिले घरमुलीले खाने चलन थियो । राम्रो र मिठो मसिनो छानेर । बचेको अरुलाई । घरको अरु सदस्यलाई पुग्यो ? पुगेन ? के भयो ? त्यसले फरक पर्दैनथ्यो । घरमुलीको पेट टन्न भरियो, बस सबै सदस्यले त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने । अहिले नेपालको शासन पद्धति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ । राज्यको शासनसत्ता सम्हालेका मुलीलाई पुगेपछि भयो । नागरिकहरुको पिरमर्का, गाह्रो साँग्रो के छ ? राज्यमा के को खाँचो छ ? मतलब छैन । बस सत्तामा आसिन मुलीहरुले सोंचे अनुरुप हुनुप¥यो । उनिहरुको आवश्यकता पुरा हुनुप¥यो । उनिहरुलाई पुगेपछि सबैलाई पुगे सरह भयो । चाहे नागरिकसंग विहान बेलुकाको छाक टार्न सक्ने अवस्था छैन । चाहे नागरिकसंग बस भाडा नभएर बीसौं किलोमिटर पैदल हिड्न परोस् । उनिहरुले करोडौंको गाडि चढेको हेरेर÷सुनेरै चित्त बुझाउनु पर्ने । चाहे नागरिकको शिरमा छतै नहोस्, तर उनिहरुलाई पाउ राख्न करोडौंको गलैचा चाहियो । चाहे नागरिक सिटामोल खान नपाएर मर्नै किन नपरोस् । उनिहरुलाई आफ्नै निवासमा जीमखाना चाहियो । ती व्यक्तिहरु जस्ले आफ्नो पैसा खर्चेर जीम खाना सायदै कहिल्यै पुगेको थिए होला ।
मेरो आलेखहरुमा सरकारप्रतिको गुनासो र असन्तुष्टि झल्कि रहन्छ । तर म सरकार विरोधी होइन । सरकारको सही निर्णय र कदममा समर्थन र साथ दिन सदैव तयार छु । तर एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले सरकारको निर्णय र कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउने र गुनासो पोख्ने हक पनि मसंग छ । गुनासो नगरौं भन्छु तर बेलाबेलामा आफैले छानेको सरकारले उट्पट्याङ हरकत गरिरहन्छ र गुनासो गर्न बाद्य हुन्छु । अहिलेको राष्ट्रपति निवासको गलैचा फेर्ने र मन्त्री निवासमा जीम खाना बनाउने सन्दर्भलाई नै नियालौं न । पुरै राज्य कोरोना महामारीसंग लडि रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा यति ठूलो संकट आईपरेको अवस्थामा सीतल निवासमा करोडौंको गलैजा फेर्ने र मन्त्री निवास जहाँ लगभग करोडको जीमखाना बनाउने कुरा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राज्यमा कसरी सान्दर्भिक हुन्छ ? हो, राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयको गणतान्त्रिक नेपालमा आफ्नै महत्व छ । सीतल निवास समग्र गणतान्त्रिक नेपालको अभिभावक हो । तर के सीतल निवासमा जानु भनेको केबल विलासीताको लागि मात्र हो ? कि जनताको सेवाको लागि ? हो राष्ट्रपति कार्यालयको आफ्नै उच्चस्थान हुन्छ, सम्मान हुन्छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । तर सीतल निवासबाट विमानस्थल जान अरबौंको हेलीकप्टर चाहिने, करोडौंको गाडि फेरीरहनु पर्ने, रातो कार्पेट नभै हिड्ने नहुने ? गलैचा मात्र करोडौंको हाल्नु पर्ने । यो कस्तो अभिभावकत्व हो महामहिमहरुको ?
गलैंचा फेर्ने र जीम खाना बनाउने कुरा गतबर्षकै बजेटमा समावेशमा भएको हुँदा तर्कवितर्क गर्न आवश्यक नरहेको बताई रहेका छन् कोही माननीयहरुले । त्यसो भए तर्क नगरौंला । तर माननीय ज्यूहरुलाई एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने गतबर्षकै बजेट भएपनि यो विषम परिस्थितिमा गलैचा फेर्न पर्ने, जीम खाना बनाउनै पर्ने त्यस्तो बाद्यता केही छ ? सरकारले कोरोना भाईरससंग लड्न राहतकोष स्थापना गरिरहँदा त्यो रकम त्यही समावेश गर्न सकिदैन । यसो गर्दा सरकारको र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको पनि शीर उचो हुने थियो । ‘कोरोना भाईरसको कारण अर्थतन्त्रमा ह्रास भएको भन्दै सीमित संख्यामा रहेका एकल महिला र अपाङ्गको मासिक दुई हजार भत्ता कटौती गर्ने सरकारले कुन नैतिककताले गतबर्षको बजेट भन्दै गलैचा फेर्न लागेको र कस्लाई रिझाउन जीम खाना बनाउन लागेको हो ? के यही हो गणतान्त्रिक नेपाल सरकारले निभाउने अभिभावकत्व ?’
हाम्रो गाउँभन्दा पल्लो गाउँमा एकजना किसान दाजु हुनुहुन्छ । अत्यन्तै सरल र फरासिलो । जहान परिवारलाई असाध्यै मायाँ गर्ने । हुँदा र छँदा सम्म जहान परिवारको मुखमा मिठो मसिनो परोस् भन्ने चाहने । सालाना लत्ताकपडा फेर्दि रहने तर आफ्नो लागि भने एउटा कमिज पनि दुई तीन बर्षमा मात्रै किन्ने । पोहोर भदौ ताका भेट्दा दाई निक्कै प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो । सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मज्जा मज्जाका तीनवटा खसी बेचे भाई । दशैंलाई एउटा बोको राखेको छु । यसपालि दशैमा चाहि भाउजुलाई पनि कानमा थपिदिनु प¥यो । लत्ताकपडा गरेर बचेकोले यसपालि चाहि आफ्नो नि रंग फेर्नु पर्ला । पछि भेट्दा थाहा भयो, आफ्नो रंग फेर्ने दाईको सपना पोहोर पनि अधुरै भएछ । दशैंको लागि राखेको बोको खै के भएर मरेछ । दाईले आफ्नो भागको खर्च जहान परिवारलाई मिठो मसिनो ख्वाउनमै खर्चेछन् ।
नजिकै आईपुग्यो कोरोना-सम्पादकीय
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष र पिडितको अवस्था
नेपालको शिक्षा पद्धतिः अवस्था र आवश्यकता
कोभिड भ्याक्सिनबारे जान्नैपर्ने ६ तथ्य
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिः मापदण्ड
क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६
बुध, फाल्गुन १९, २०७७
कविता नारी 3rd March 2021
महिला हिंसा र न्यूनीकरणका उपाय 3rd March 2021
सन्दर्भ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस महिला कि म हेलाँ ? 3rd March 2021
सन्दर्भ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस महिला कि म हेलाँ ?